Rikoooo.com - kpochapụwo airliners
Jikọtara: 30 Mar 2017, 17:36 am
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by harrislarry1946 » 12 Eprel 2017, 06:03
Ekele ................. ọ dịtụwo mgbe i chere na nke na-eme ka a DC8 download ??
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by Gh0stRider203 » 12 Eprel 2017, 06:08
ugbu a nke ahụ ga-atọ ụtọ. E nwere ihe ole na ole n'ebe ahụ, ma freeware na payware ma otu onye si Rikoooo ga-adị mma
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by harrislarry1946 » 13 Eprel 2017, 00:06
Ọ ga-adịrị mma ma ọ bụrụ na redio ahụ na-arụ ya.
Ana m eme ọtụtụ n'ime ụgbọ m na FS2004 na ọnọdụ IFR ma hụ ụdị ememme 757 ahụ
ị nweghị ike ịtọ redio ka ị banye n'ụlọ na VOR ma ọ bụ ILS ..... ihe dị mma nke na-eme.
Ọ bụrụ na ha mee DC8, ọ ga-adị mma ịnwe mbipute agbatị.
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by Gh0stRider203 » 14 Eprel 2017, 16:55
Enwere m ike ị na-ebu ibu ruo ogologo oge ka m wee mee IFR naanị na mwepụ / ọdịda Ọ bụrụ na m nwere. Enweghị m oge m ga-anọ na-elele ATC. Ọ bụghị ịkọ ụfọdụ ụgbọ elu m na-eme n'otu abalị ma ana m enwe obi ụtọ na ihe a mara dịka ụra ugbu a na mgbe ahụ lol